Adiresy: 157 Jong-ro, Jongno 1 (il) .2 (i) .3 (sam) .4 (sa), Jongno-gu, Seoul, Korea Atsimo
Tel: +82 2-765-0195
Daty nanorina: faha-14 c.
Ny tanànan'i Seoul sy ny tanàn-dehibe goavana dia nahasarika mpizahatany vahiny niaraka tamin'ny fihodinan'ny fiainana sy ny kolontsaina tany am-boalohany, miorina amin'ny fomban-drazana taloha sy vaovao. Tsy mahagaga raha ao amin'ny tanàna iray izay misy olona 10 tapitrisa no mipetraka, misy faritra marobe mangina sy mangina izay ahafahanao mankafy fiadanana sy mangina.
Ny tanànan'i Seoul sy ny tanàn-dehibe goavana dia nahasarika mpizahatany vahiny niaraka tamin'ny fihodinan'ny fiainana sy ny kolontsaina tany am-boalohany, miorina amin'ny fomban-drazana taloha sy vaovao. Tsy mahagaga raha ao amin'ny tanàna iray izay misy olona 10 tapitrisa no mipetraka, misy faritra marobe mangina sy mangina izay ahafahanao mankafy fiadanana sy mangina. Ny iray amin'ireo toerana ireo no faritra manan-tantara sy ara- tantara indrindra ao Korea Atsimo - ny fitoerana masin'i Chonme. Andao hiresaka bebe kokoa momba izany.
Zava-dehibe ny mahafantatra
Chongmyo, any amin'ny faritra afovoan'i Seoul, dia iray amin'ireo toerana lehibe any Korea Atsimo. Ny tanjona voalohany nananganana ny tempoly, naorina tamin'ny taonjato faha-14, dia ny faharetan'ny mpikambana efa nodimandry tamin'ny mpanjaka Joseon. Ny maha-zava-dehibe an'ity toerana ity koa dia hita taratra amin'ny toerany ara-jeografika: ny fitoerana masina dia voahodidin'ireo olo-malaza "Five Great Palaces". Ankoatr'izany dia ny Lapan'i Changyonggun , kely kely any atsimo - Changdeokgun , any atsinanana - Gyeongbokgun , avy any atsimo andrefana - Toksugun ary any avaratra - Gyeonghong .
Ny rafitry ny Sanctuary Chonme
Ny voalohany sy tamin'izany fotoana izany no nanorenana trano lehibe tao amin'ilay trano lehibe tamin'ny Oktobra 1394, fony i Daejon, ilay mpanjaka voalohany tao amin'ny Dynasty Joseon, dia nanetsika ny renivohitra ho any Seoul. Avy eo dia noheverina ho iray amin'ireo lava indrindra amin'ny kaontinanta iray manontolo io rafitra io. Ny efitra lehibe indrindra, Jongjon, dia nizara ho efitra 7 ho an'ny mpitondra sy ny vadiny. Taona maro taty aoriana dia nihalehibe sy nitatra ny trano, ary ny isan'ireo efitrano efa nahatratra 20. Na dia rava nandritra ny ady Imda aza ny tempoly, tamin'ny taona 1600, dia naverin'ny manampahefana indray ilay izy, izay ahafahan'ny mpitsidika rehetra mahita ny trano masin'i Korea Atsimo.
Tsara ny manamarika fa ny fitambaran'ny dina Joseon nandritra ny fitondran'i Joseon dia nifaneraserana avokoa ireo lapa, avy eo dia nanamboatra ny lalana teo anelanelan'izy ireo ireo mpanjanaka Japoney. Efa nisy ny drafitra natao tamin'ny fametrahana indray ny rafitra teo aloha, ary tsy ho ela dia ho tanteraka izany.
Fombafomba Jongmyo jeryeak
Amin'izao fotoana izao, ao amin'ny faritry ny tempoly, misy fomban-tany fahiny antsoina hoe Jongmyo jeryeak natao isan-taona, ny Alahady voalohany amin'ny volana Mey. Ity hetsika manan-danja ity dia ahitana hira sy dihy, ary ny mozika, izay fehezin'ny fombafomba, dia niseho tamin'ny vanim-potoan'i Kor (918-1392), nandritra ny taonjato maro talohan'ny mozika Baroque tany Eoropa. Amin'ny feon-kira dia afaka mandre ny feon'ireo rivotra mahery sy ireo fitaovana malefaka, ary ny mozika mahafinaritra dia mamorona hira mendrika sy mahatalanjona, mifanandrify amin'ilay fombam-pitenenana lehibe indrindra Jongmyo Jeryek.
Mino fa ny hira toy izany dia manasa ireo fanahy hidina avy any an-danitra hankany an-tany mba hankafy ny zava-bitan'ny mpanjaka amin'ny famoronana taranaka ary hiaro ny firenena, ary hamporisika ireo taranaka hanaraka ny dian'izy ireo. Ankehitriny, ireo mpikambana ao amin'ny Fikambanana Royal Family Jeonju Yi dia mitarika fombafomba ho an'ny mozika sy dihy, asehon'ireo mpihira avy amin'ny Foibem-pirenena ho an'ny Koreana nentin-drazana nentim-paharazana ary mpandihy avy amin'ny Sekolim-pirenena Gukaku.
Aiza no tokony hijanonana eo akaiky?
Maro ny mpizahatany mpizaha tany, manomana fitsangatsanganana, miezaka mametraka efitrano iray ao amin'ny iray amin'ireo trano fandraisam-bahiny akaikin'ny sehatra manan-danja. Raha te hijanona ao amin'ny iray amin'ireo trano fandraisam-bahiny akaikin'ny tempolin'i Chonmé ianao dia manoro hevitra ihany koa ianao fa tokony handinika ireto toerana manaraka ireto ianao:
MayPlace Hotel - manomboka amin'ny $ 85. isanandro;
Makers Hotel - avy 80 USD;
Atrium - avy amin'ny 78 cu;
Amare Hotel Jongno - avy 70 USD;
Hotel Cullinan - от 50 у.е.
Mandehana any amin'ireo toerana voatanisa ao amin'ny lisitry ny harena nasionalin'i Korea, amin'ny fomba maro:
Amin'ny metro . Tokony handeha any amin'ny Station Station Jonggo Station 3-ga (fiantsana laharana 130 ho an'ny tsipika 1, fiantsoana laharana 329 ho an'ny lin-dàlana telo, fiantsonana 534 ho an'ny 5).
Amin'ny taxi na fiara tsy miankina. Koa satria i Jonme dia ao afovoan-drenivohitra, dia ho mora ny hahita izany amin'ny alàlan'ny fandrindrana, na dia mandeha sambany aza ianao ao Seoul .
Azo atao ve ny fiverenan'i Brad Pitt sy i Angelina Jolie?
Diuver - analogies
Ny fangatahan'ny Taombaovao ho an'ny ankizy 6-7 taona
Hevi-diso momba ny fahaverezan'ny tsy fananan-tsiny
Ny akanjo ataon'ny anjely amin'ny tananao
Ny mammograma sy ny ultrasound ny vata-mangatsiaka
Manicure eo amin'ny rano
Famerenana ny hazondamosina
Aloe avy amin'i Filatov
Amin'ny akanjo hikolokolo amin'ny ririnina?
Ahoana ny fihoaram-bolo makadiry?
Calendula Oil - fampiharana